Godina Wallaggaa bahaa magaalaa Angar Guuttiniitti midhaan kuntaala 400 ta’u ABO-Shaneedhaan saamameera jedhame - ዜና ከምንጩ
Godina Wallaggaa bahaa magaalaa Angar Guuttiniitti midhaan kuntaala 400 ta’u ABO-Shaneedhaan saamameera jedhame
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa, aanaa Limmuu, magaalaa Angar Guuttiniitti, manni mare bakka bu’oota uummataa gooltummaatti kan murteesse ABO Shaneen midhaan buqqaatonni qallabaaf geejjibataa turan kuntaala 400 saamuu isaa komattoonni Addis Maaledaatti ibsan.
Odeeffannoon Addis Maaledaan argatte akka mul’isutti yoo ta’e; Muddee 11 bara 2014jiraattonni Angar Guttinii naannawaa mandaraa 6; midhaan qallabaaf ta’uuf fe’anii gara magaalaa naga-qabeessaa Guttiniitti utuu geessaa jiran gareen hidhataa Shanee akka isaan same hubachuun danda’ameera.
Gareen hidhataa Shanee naannawicha gdhiiseera jedhanii yaaduun; qaawwaa argametti fayyadamuun midhaan qallabaaf ta’u mandara 6 fe’anii utuu miliqsuuf jedhanii garichi bakki dhufe utuu hinbeekamin “buusaa” jechuudhaan midhaanicha akka same komee dhiyeessitoonni Addis Maaledaatti ibsaniiru.
Gaarii gaangotaa 60 ta’utti fe’amuun geejjibamaa kan ture midhaan kuntaalli 400 wayita “magaalaa Arooyyee” gahutti akka saamame miidhamtoonni ibsaniiru.
Namoota komee dhiyeessan keessaa maqaan isaanii akka eeramu kan hinbarbaadin tokko; buqqaatota waan taaneef deeggarsi nuuf taasifamuu utuu qabuu; midhaan qallabaaf miliqfataa turre kuntaala 400 hidhattoonni ABO-Shanee nurraa fudhataniiru jechuun ibsaniiru.
Namni kun itti dabaluunis; midhaanicha erga buusanii booda mankuusaa magaalaa Guutaniitti galchaniiru kan jedhan yoo ta’u, mana keenya gadhiisuun gahaa ta’ee utuu jiruu, midhaan nyaataaf nuuf ta’a jenne saamamneerra; mootummaan eessa jira? Jechuudhaan gaafataniiru.
Walqabsiisuunis; nuuf qaqqabaa jechuun erga iyyuu jalqabnee waggaa tokkoo ol yoo ta’es, hanga yoonaatti (hanga gabaasni kun qophaa’etti) gareen hidhataan kun ajjeesuu fi saamuu hindhaabne. Lammiiwwan gara bakka biraatti bahuuf yaadan hedduunis butamaa fi ajjeefamaa turaniiru jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru.
Haala walfakkaatuun maddi Addis Maaledaa akka maqaan isaanii hintuqamne eeran; gareen hidhataa kun midhaanicha buqqaatota irraa kan same “hattanii fiddan” sababa jedhu uumuun akka ta’e dubbatan.
Haala walqabatuunis; kanaan dura lubbuu isaanii baraaruudhaaf mana isaanii gadhiisanii namoonni bahanii turan gareen hidhataan kun wayita qaaxxee raawwatu hir’isetti qaawwaa uumame fayyadamuudhaan gara naannoo isaaniitti deebi’anii midhaan qallabaaf ta’u fe’atanii wayita deebi’anutti kan saamaman jiraachuu namni yaada kennan kun eeraniiru.
Kanaan walqabsiisuunis; torbeewwan lama dura namoonni midhaan kuntaala 200 gaariitti fe’atanii adeemaa turan midhaanicha saamamuu isaanii kan eeran namni kun; namoonni midhaanichaa geejjibaa turan 30 olii fi gaangonni 30ni hidhattootaan butamanii fudhatamaniiru jechuun ibsaniiru.
Namoonni yaada kennan kun dabalataanis; achuma Angar Guuttiniitti midhaanichi osoo hinsaamamin dura gareen hidhate kun namoota lama akka ajjeese ibsanii; qaamni qabeenya jiraattota naannichaa saamuu irraa baraaru hanga ammaatti argamuu hindandeenye jedhaniiru.
Namoonni komicha dhiyeessan mana keenya keessa akka hinteenye ajjeechaatu nurratti raawwatamaa jira; gara bakkeewwan nagaa qabanuutti adeemuuf wayita yaallu daandii argachuu hindandeenye; kanatti dabalataanis qabeenya keenya illee mirga nyaataaf itti fayyadamuu dhorkamnee beelli nutty aggaameera jedhaniiru.
Kanumaan walqabsiisuun; ammas taanaan utuu abdii hinkutin furmaata mootummaa eeggataa jirra waan ta’eef; gargaarsa mootummaa atattamaan barbaanna jechuun hubachiisaniiru.
Odeeffannoon madden ishee irraa Addis Maaledaa qaqqabe akka mul’isutti yoo ta’e; naannoo “Andoodee” jedhamutti humni addaa naannoo Oromiyaa namoota nagaa irratti hubaatii qaqqabsiisuu jalqabee tumsa raayyaa ittisa biyyaatiin dhaabbachuu danda’uu isaa ti.
Addis Maaledaan waa’ee dhimmichaa irratti deebii argachuuf gara ajejaa poolisii godinichaa Komaandeer Taarikuu Girbaabaatti yoo bilbila bilbiltes; bilbila kaasuuf waan hinhayyamaminiif yaada isaanii itti ida’uu hindandeenye.
Addis Maaledaan Sadaasa 24 bara 2014 aanaadhuma kanatti namoonni nagaan 19 ajjeefamuu isaanii fi hojjettoonni guyyaa 20ni butamuu isaanii gabaasuun ishee ni yaadatama.
Total views : 7537982